Haweeney Somali ah oo meydkeeda laga helay Gurigeeda magaalada San Diego ee dalka Mareykanka +VIDEO | Wardoon
Home Somali News Haweeney Somali ah oo meydkeeda laga helay Gurigeeda magaalada San Diego ee...
Haweeney Somali ah oo meydkeeda laga helay Gurigeeda magaalada San Diego ee dalka Mareykanka +VIDEO
Wararka laga helayo dalka Mareykanka ayaa sheegaya in haweeney Soomaali ah meydkeeda laga helay gurigeeda oo ku yaalla magaalada San Diego ee gobolka California wadanka Mareykanka.
Haweeneydan oo lagu magacaabo Muna Kuri,. da’deedana lagu sheegay 36 sano jir ayaa warkeeda la waayey ilaa Sabtidii, waxaana markii danbe meykeeda laga helay isla gurigii ay ku nooleyd iyadoo dhaawacyo ka muuqdaan qeybta hore ee jirkeeda.
Amiina Salad oo la dhalatay Muna ayaa sheegtay in walaasheed warkeeda iyo wacaalkeeda la waayey Sabtidii, isla markaana uu jiro tuhun ah in Ninkeeda uu ka dambeeyay dilkeeda, waxaana kiiska la wareegay Booliiska oo baaritaan bilaabay.
Saxaafadda Mareykanka ayaa sheegeysa in Muna ay markeedii hor ka timid dalka Kenya, isla markaana ay ahayd qof dabeecad wanaagsan oo ka shaqeysa goob lagu xanaaneeyo caruurta.
Previous articleDowlada Soomaaliya oo war cusub kasoo saartay khilaafka Kenya
Next article[Akhriso] Afar qodob oo ay kuheshiiyeen Farmaajo iyo Abiy
DAAWO:-Musharax Burka oo sheegay in taagerayaashisa Guri u dhisayaan
DAAWO:-“waxwalbao oo ay ku Qanci karaan Walaalaha Waqooyi ayaan Diyaar u nahay”
Guddi baaris ah oo loo saaray Dowladdii Farmaajo
SAWIRRO Dabaaldag weyn oo lagu taageerayo dib u doorashada Axmed madoobe...
Madaxweyne Deni iyo boqor Burhaan oo Khilaafkoodu soo shaac baxay